Asus 19V 2.37Ah Adapter (S.H)-4 ~ ICT.com.mm
HomeAsus 19V 2.37Ah Adapter (S.H)-4
Asus 19V 2.37Ah Adapter (S.H)-4
Asus မှထုတ်လုပ်ထားသည့် Asus အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည့် Asus 19V 2.37Ah Adapter (S.H) ဖြစ်ပါသည်။ မီးအားအသုံးပြုမှုမှာ 45W ဖြစ်ပါသည်။ Output Voltage : 19V 2.37Ah ဖြင့် အားသွင်းနိုင်ပါသည်။ အာမခံသက်တမ်းမှာ (၁)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ Type: Battery Charger, Compatible Brand: Asus, Output: 19V, Power:... [Learn more]
Brand: ASUSFilter by: Adapters & Chargers - PC, Best Secret Service, USD
Asus မှထုတ်လုပ်ထားသည့် Asus အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည့် Asus 19V 2.37Ah Adapter (S.H) ဖြစ်ပါသည်။ မီးအားအသုံးပြုမှုမှာ 45W ဖြစ်ပါသည်။ Output Voltage : 19V 2.37Ah ဖြင့် အားသွင်းနိုင်ပါသည်။ အာမခံသက်တမ်းမှာ (၁)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။
Type: Battery Charger, Compatible Brand: Asus, Output: 19V, Power: 45W, Amperage: 2.37 Ah
Thanks for the quick delivery!
Got the right adapter sent, great price and quick shipping considering the situation. Thank you.
Thank you for the great review! We are so happy you loved your purchase and shopping experience and can not wait to have you back for your next shopping with us. Until then, we’re here if you need anything.